Ny distrikan'ny tanning any Florence - Pisa Pelle Italiana hoditra
Ny distrikan'ny hoditra sy kiraro ao Tuscany dia zava-misy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, ny hatsaram-panamboarana vita any Italia, izay afaka naneho tsara ny olana ara-toekarena, miantoka ny asa. Florence dia nifantoka tamin'ny entana lafo hoditra ary noho izany dia nahazo fandresena!
Ny distrikan'ny entana lafo vidy
Ny distrikan'i Florentine dia manam-pahaizana manokana amin'ny entana lafo vidy. Izy ity dia distrika mahazatra, izay manolotra ny asa tanana rehetra sy ny fizotran'ny indostria ary nahavita nitety ny krizy.
Mitanisa ny angon-tsoratry ny Il Sole 24 Ore (loharanom-baovao: Centro Studi IntesaSanpaolo), amin'ireo distrika 20 tena mavitrika amin'ny fitomboan'ny tahiry, ny sehatry ny entana vita amin'ny hoditra ambony ao amin'ny distrikan'i Florence dia mivoaka ary eo an-tampon'ny fampidirana manokana momba ny famokarana. faritra any Italia: miaraka amin'ny fanondranana 3.8 miliara tamin'ny taona 2017, efa ho avo roa heny izany nanomboka tamin'ny taona 2008. Vokatry ny ambaratonga lehibe dia nahatratra ny fisaorana noho ny hetsika nataon'ny orinasa samy hafa sy ny mpiantoka.
Ireo entana vita amin'ny hoditra lafo vidy ao amin'ny faritr'i Florentine dia mamokatra harona sy poketra misy ny marika malaza eran'izao tontolo izao: Gucci, Prada, Dolce & Gabbana, Bulgari, Ferragamo, Fendi, Tiffany, Cartier, Dior, Celine, Montblanc, Givenchy ary Chanel, mba hanonona fotsiny vitsy.
Ny distrikan'ny indostrian'i Santa Croce sull'Arno, eo anelanelan'i Florence sy Pisa, dia iray amin'ireo faritra eropeana manandanja indrindra amin'ny fikolokoloana hoditra. Izy io dia manokana amin'ny famokarana ny kiraro sy ny vokatra vita amin'ny hoditra ary ny hany distrika izay ny fizarana manokana dia manarona ny rojo famokarana hoditra manontolo: raha ny fanazaran-tena, manomboka amin'ny fikolokoloana hoditra ka hatramin'ny vokatra vita, indrindra ny kiraro vita amin'ny tongotra.
Raha ara-jeografika dia misy faritra eo amin'ny 330 kilometatra toradroa ilay distrika ary misy orinasa kely antonony. Ny famokarana lehibe dia mahaliana ny entana vita amin'ny hoditra, tongotra, ary hoditra. Ny mahaliana dia ny hoe 40% eo ho eo ny famokarana no haondrana.
Ny anarana lehibe sy ny stylists dia mihevitra ny distrikan'i Santa Croce ny fulcrum amin'ny famoronana hoditra. Ny ho avy ho an'ny distrika ankehitriny dia mifantoka amin'ny rafi-piofanana sy ny fikarohana, izany hoe ny oniversite, oniversite teknika miady amin'ny simika ary ny andrim-panjakana matihanina ho an'ny mpandrindra ny fikarakarana hoditra.
20 martsa 2021 tamin'ny 00:16 maraina
11 martsa 2021 tamin'ny 22:51 alina
08 Febroary 2021 amin'ny 20:27 hariva
cbd pilina hemp menaka hemp cbd gummies walmart
03 Febroary 2021 amin'ny 22:51 hariva
03 Febroary 2021 amin'ny 22:34 hariva
500mg Capsules [/ url] Amoxicillin Capsules 500mg dfd.zuwm.pisapelle.com.nbo.zf http://mewkid.net/when-is-xuxlya3/
15 septambra 2020 amin'ny 20:53 hariva
slots ho an'ny vola tena izy Vegas casino slots casino lalao http://onlinecasinouse.com/#
17 aogositra 2020 amin'ny 13:14 hariva
Te-hanana adiresy ireo mpitazona tanindrazana ao Florence aho, izay mitady hoditra vita amin'ny hoditra ambony.
Andraso ny valin-teninao.